मंगलवारको दिन भुलेर पनि गर्न नहुने यी कामहरु : धर्मशास्त्र | सुदुरपश्चिम खबर
मंगलवारको दिन भुलेर पनि गर्न नहुने यी कामहरु : धर्मशास्त्र
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : १४ मंसिर २०७८ ०६:०२
Lord Ganesha , Ganesh Festival
मं’गलबार खा’सगरी गणेश र हनुमा’नको आरा’धना गरिन्छ । यस दिन गणेशजीको आरा’धना गरे सम्पन्नत तथा सन्तान सुख मिल्ने र हुनमानको आरा’धना गरे हरेक कष्ट निवारण हुने गर्दछ ।
यसरी मंगल’बारको दिन भ’गवानको आरा’धना गरे लाभै लाभ मिल्नेछ । तथापी केहि कामहरु भने मंगलबारको दिन गर्न वर्जित गरीएको छ ।
धर्मशास्त्र’का अनुसार मंग’लबारको दिन ति काम गरेमा हानि हुने साथै जीव’नमा समस्या बढ्न सक्छ । के के हुन् मंगल’बार गर्न नहुने कामः
मंगलबा’रको दिन कपाल वा दारी काट्नु हुँदैन । यसो गर्नाले स्वास्थ्य बिग्रने भय रहन्छ ।मंगल’बारको दिन नङ काट्नु हुँदैन । मंगलबारको पैसाको लेनदेन गर्नु हानिकारक मानिन्छ । यसले धन हानि हुने संभावना रहन्छ । मंगलबार सके’सम्म घरमा हवन गर्नु हुँदैन । साथै हवन सामा’ग्री किन्नु पनि हुँदैन ।
यस दिन सौन्दर्य सामा’ग्री खरिद गर्नु हुँदैन । अन्यथा वै’वाहिक सम्बन्ध’मा दरार आउन सक्छ । मंगलबार दूधका परीकार किन्नु, सेवन गर्नु वा दान गर्नु हुँदैन । भगवा’नलाई चढाउन भने हुन्छ । मंगलबार कालो रंगको कप’डा धारण गर्नु हुँदैन । रातो रंगको कपडा लगाउनु उत्तम हुन्छ ।
महाकाली साहित्य संगमका अध्यक्ष हरिश प्रसाद जोशीले गरे आमा…
तयार भयो गौतमबुद्ध विमानस्थल
यस दिन फला’मका सामान खरीद गर्नु हुँदैन । यसलाई अशुभ मानिन्छ ।
मगंल’वार ब्रत वस्ने वा दान गर्ने ब्यक्तिले गुलियो परीकार सेवन गर्नु हुँदैन ।हनुमानको व्रत बस्ने मानि’सले दुबै छाक नुनको सेवन गर्नु हुँदैन ।
मंगलबार घरमा हनुमा’नको पुजा छ भने घर पूर्णतः शुद्ध राख्नुपर्छ । जुठो र फो’होर हुनुहुँदैन ।
मंगलबा’रको दिन धारिलो बस्तु’को खरिद गर्नु हुँदैन । जस्तो चक्कु, छुरी कैचीं । मंगल’बार भुलेर पनि आमासंग ठुलो स्वरमा कुरा गर्ने वा बहस गर्ने गर्नु हुँदैन । मंगल’बार पशु बलि दिनु हुँदैन । पशुवली दिएमा सन्तानमा नका’रात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ ।
मंगल’बार कुखुरा वा अन्य पं’क्षीको हत्या गर्नु हुँदैन । अन्यथा मानिसको बुद्धी भ्रमित हुन्छ । मंगलबारको दिन माछा खानु हुँदैन यसले आर्थिक नोक्सा’नी बनाउने गर्दछ । मंगल’बारको दिन मासुको पनि सेवन गर्नु हुँदैन । मंगल’बार मासु खँ“दा कुटुम्बको क्षय हुन्छ ।
यस दिन मदि’रा सेवन गर्नु हुँ’दैन यसले क्रोध वृद्धि गर्ने र आपराधिक मानसिकता बनाउछ । मंगल’बारको दिन झगडा गर्नु हुँदैन । अन्यथा आफ्नै बेइज्ज’त हुने खतरा रहन्छ । मंग’लबार कसैसंग झुटो बोल्नु हुँदैन । यसले हानि निम्त्या’उन सक्छ । बरु नबोल्नु’होस् । gnewsnepal.com बाट सभार
महाकाली साहित्य संगमका अध्यक्ष हरिश प्रसाद जोशीले गरे आमा बुवाको स्मृतिमा पुरस्कार…
प्रतिरोधी क्षमता कमजोर हुनुका यी पाँच संकेत !!
सार्वजनिक गाडीमा भिडभाड घटेन : जोर–बिजोर प्रणालीबारे थप छलफल गर्ने तयारी
आज माघ १४ गते शुक्रबार, यस्तो छ आजको पञ्चाङ्ग र राशिफल !!
इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेट खेल्न नाम दर्ता गराएका…